CAQLI BADANAA: Bal DAAWO jawaabta Mesut Ozil mar la waydiiyay su’aasha ma dhammaatada ah ee kee fiican Ronaldo iyo Messi?!!!! – Gool FM
Byare June 30, 2016
(Europe) 29 Juunyo 2016. Waa su’aal ma dhammaato ah waxaa la waydiiyaa cid kasta oo wax ka garaneysa kubbada cagta waa wiilasha ku guuleystay Ballon d’Or sideedii sano ee ugu dambeysay ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Mid wuxuu u xagliyaa guusha dhanka Ronaldo midna Messi midna wuu ka gaabsadaa oo labaduba inay khatar yihiin ayuu ku sheegaa laakiin Ozil ayaa wado kale ka baxay mar la waydiiyay su’aasha ah kee fiican Ronaldo iyo Messi.
Ozil ayaa soo bixiyay maaliyado uu ka qaatay Messi sida mar uu kaga hor yimid kulanka ugu xiisaha badan kubbada cagta casriga ee El Clasico intii uu joogay Real Madrid iyo mid uu ka qaatay finalkii koobka adduunka ee 2014 uu xulkiisa Jarmalka ka qaaday koobka xulka Argentina.
Wuxuu sheegay Ozil in cidkastaa garaneyso tayada Messi laakiin mar uu ka jawaabaya Messi iyo Ronaldo midkii fiican ayuu yiri: “Dhab ahaan waa labo ciyaaryahan oo heer caalami ah, laakiin waxaan ahay oon ahaan doonaa taageere Zidane ah, sidaa dartee Zidane ayaan leeyahay waa kan ugu fiican.
CIYAAR KALA BAX AH: Xiriirrada kubadda cagta Yurub iyo Ameerika oo mabda' ahaan isku raacay arrin muhim ah! (UEFA vs Conmebol)
XAN LA IS KALA TAG! Hadii aad tahay taageere United- ah ka doono Funaanada saxiixa cusub ee Manchester United dukaankooda hadii kale Website-kooda rasmiga ah ayaa qaldamay!